अमर्यादित गालीगलौजतिर नेकपाका नेता - Sankalpa Khabar
2. लक्ष्यभन्दा २३ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
3. देशमा स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव, यस्तो छ आगामी तीनदिनको मौसम अवस्था
4. ओली-नेपालबीच आज पनि भेटवार्ता
अमर्यादित गालीगलौजतिर नेकपाका नेता
१६ फाल्गुन १०:२८
काठमाडौं । नेकपा विभाजन भए पनि अहिले एक पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई गालीगलौज गर्ने क्रम रोकिएको छैन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भनेका थिए– वैद्यले छाडेपछि डाक्टर ल्याए, डाक्टरले पनि छाडेपछि अहिले झाँक्री ल्याएका छन् । तर, उनलाई झाँक्रीले पनि बचाउन सक्दैन ।’ तर, ओलीले त्यसो भनेको चार दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि अहिले नेकपामा एकअर्कालाई लक्षित गर्दै लेख्ने र बोल्ने काम हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु भनेको गोरु ब्याएर बिगौती खानु जस्तो हुने भनेर मर्यादाको हद पार गरेका थिए ।
शनिबार मात्रै प्रचण्ड–नेकपा समूहका रघुजी पन्तले राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल वलीलाई तल्लोस्तरको टिप्पणी गरे । उनले एक कार्यक्रममा कोमल वलीको पिडौंला देखेर केपी ओलीले सांसद मनोनीत गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले त्यसले उग्र रूप लिएको छ ।
आफूमाथि अपशब्द प्रयोग भएपछि सांसद वली रघुजी पन्तमाथि खनिएकी छन् । गायिकासमेत रहेकी वलीले शनिवार साँझ ट्वीटरमार्फत पन्त निच भएको खुलेको आरोप लगाएकी थिइन्। आइतवार बिहान वलीले फेसबुकमार्फत पनि आपत्ति जनाएकी छिन्।
ट्वीटरमा वलीले लेखेकी छिन्, ‘हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदोरहेछ भन्ने बल्ल खुलेको छ।’ वलीले महिलामाथि प्रकट गरिएका दरिद्र सोचको सिकार महिलाहरु हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्नसमेत गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, ‘पन्तजीलाई मेरो प्रश्न, तपाईको पार्टीमा कुनै पदमा रहनुभएका महिला नेतृहरुले को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्नुभएको हो ? के यो देशमा महिला कुनै पदमा पुग्न तपाईको जस्तो दरिद्र सोचको सिकार हुनुपर्छ ?
फेसबुकमार्फत उनले एकअर्काको सम्मान गर्न नसिक्ने नेतृत्वले समाजलाई दुर्घटनातिर लैजाने बताएकी छन्। ‘पूर्वीया दर्शनदेखि मानव विकासमा महिलाको उच्च सम्मान समाजको कसिमा उत्तीर्ण भएर भएको छ। प्रकृतिले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको हो। एकअर्काको आदर सम्मान विना समाजमा न्याय समानता र विवेकशीलताको अन्त हुन्छ। समाज हिंसा तिर जान्छ र दया करुणा जस्ता कुरा हराउँछन् । तसर्थ एकले अर्कालार्इ सम्मान गर्नु जीवनलाई मर्यादित र सरल बनाउनु हो। तर नेकपाका नेता रघु पन्तले महिलाहरुले प्राप्त गर्ने पदहरु पिंडुला देखाएर भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ वहाँको मानव बिकासका क्रममा बन्ने तन्तुहरु विचैमा रोकिएको जस्तो छ। वहाँले प्रयोग गर्ने शव्दहरुले आफ्नो आमा दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको छ। विवेक हिन मानिसको आलोचनाले आफैलाई आलोचित गर्दछ यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र समाजको दुर्घटना कति टाढा होला ?
कोरोना महामारी बढेपछि तरुण दलको भेला स्थगित
८ बैशाख १४:१६
५ बैशाख १७:०९
नेपाल पक्षका सांसदले स्पष्टीकरण दिने
७ बैशाख १७:४८
बुढानिलकण्ठमा बस्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठक, यस्ता छन् एजेन्डा
८ बैशाख १०:०९
९ बैशाख १४:३८
निकट भविष्यमै माधव नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन्छ :…
५ बैशाख १६:५६
डेब्युमा कुशल र आशिफको अर्धशतक, नेपालको जीत
४ बैशाख १६:२६
कोभिड–१९ विरुद्धको स्पुतनिक फाइभ खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति
८ बैशाख १५:२३